FIFA Football 12.5.03 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 12.5.03 လြန္ခဲ့ေသာ2လက
ဂိမ္းမ်ား အားကစား ဂိမ္းမ်ား FIFA Football
FIFA Football ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
ဖီဖာမိုဘိုင်း၏တစ်ဦးကရာသီသစ်ကဒီမှာဖြစ်ပါတယ်။ အတှေ့အကွုံ All-အသစ်ကဂိမ်း, ဂရပ်ဖစ်, ဌာနမှူးဦးခေါင်းမှ mode ကို, အဖွဲ့ကဓာတုဗေဒနှင့်ပိုပြီးအနေနဲ့အဆင့်မြှင့်ဂိမ်းအင်ဂျင်နှင့်အတူ။ ဒါဟာမိုဘိုင်းအတွက်တစ်ဖွဲ့လုံးအသစ်ကအဆင့်အထိခေါ်ဆောင်သွားကမ္ဘာ့ဂိမ်းဖြစ်ပါတယ်။
သင့်ရဲ့ Ultimate Team Build နှငျ့သငျစူပါစတားအဆင့်အတန်းမှမဆိုကစားသမားလေ့ကျင့်အဖြစ်ပြိုင်ဘက်အပေါ်ကို ယူ. , တိုက်ခိုက်ပြိုင်ဘက်များနှင့်ကြာမြင့်စွာလတ်ဆတ်နေ့စဉ်အကြောင်းအရာအားလုံးကိုရာသီထိတွေ့ဆက်ဆံ။ Plus အား, 100 အောက်တွင် MB အထိတစ်ဒေါင်းလုပ်အရွယ်အစားနှင့်အတူသွားလာရင်းဂိမ်းသို့ရ။
REAL-TIME PVP နဲ့ခေါင်းကို Battle HEAD
ဦးခေါင်း mode ကိုမှဌာနမှူးသငျသညျကို real-time အတွက်ကမ္ဘာလုံးအနှံ့မှပြိုင်ဘက်များနှင့်အတူစစ်မှန် 11v11 ဘောလုံးကစားရပါလိမ့်မယ်။ ဒါဟာကစားသမား '' အများဆုံးမေတ္တာရပ်ခံသည် Modes ထဲကတစ်ခုဖွင့်, ထိုသို့ရောက်ရှိလာခဲ့သိရသည်။ အပျော်တမ်းနှင့် Pro ကိုရုံးခွဲများအတွက်, သင်စေးပေါ်တွင်သင်၏ကျွမ်းကျင်မှုတိုးတက်စေကူညီဖို့ရန် AI အသင်တန်းပေးသူဆန့်ကျင်လိုက်ဖက်နိုငျသညျ။ ဒီ mode ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်နိမ့်ဆုံးသတ်မှတ်ချက်လိုအပ်ချက်ရှိပါတယ်။ ဒီ mode ကိုထောကျပံ့မညျဖွစျကွောငျးသတ်မှတ်ချက်များနှင့်စက်ပစ္စည်းများအတွက် https://help.ea.com/en-us/help/fia/fifa-mobile/device-coverage-for-fifa-mobile/ သွားရောက်ဖတ်ရှုပါ။
Chemistry နဲ့သင့် Ultimate တွင် TEAM ™ညျဆောကျ
ဓာတုဗေဒသုံးပြီးသင့်ရဲ့ Ultimate Team တည်ဆောက်ခြင်း Start နှင့်သင့်အဖွဲ့သည်တူကလပ်, လိဂ်, ဒါမှမဟုတ်သင့်ရဲ့ start XI အတွက်လူမြိုးတစျမြိုး၏ကစားသမားများအပါအဝင်သည့်အခါတစ်ဦးခြေထောက်တက်ပေးပါ။ သငျသညျ 550 ကျြောကိုမှန်ကန်အသင်းများအနေဖြင့်ကစားသမားများကိုရွေးချယ်အဖြစ်သင့်တန်းစီဇယားမှအတိမ်အနက်ကို Add နှင့်တိုင်းပွဲစဉ်မတိုင်မီနည်းဗျူဟာ tweaks ။ လက်ျာဖုန်းခေါ်ဆိုမှုနှင့်သင့်ကလပ်အတွက် Ultimate ရေးအဖွဲ့ဖြစ်လာစောင့်နေကြလော့။
VS တိုက်ခိုက် mode ကိုနှင့်သင်၏ထိုးစစ်ဥစ္စာသို့သငျသညျ drop ကြောင့်စိတ်လှုပ်ရှားစရာပွဲအပေါ်ကိုယူပါ။ သငျသညျ, 90 စက္ကန့်ပွဲလွှမ်းမိုးဦးဆောင်တက်နှင့်ရာသီအလိုက်ဆုလာဘ်တစ်နှစ်ပတ်လုံးဝင်ငွေဖို့ကွိုးစားနေချိန်တွင်ယှဉ်ပြိုင်မှု၏ဤဆန်းသစ်မှုအဆငျ့မွငျ့မားဂီယာသို့သင့်ရဲ့ဂိမ်းသွားပါသည်။
လျင်မြန်စွာ LEAGUE နှင့်လောကကိုအောင်နိုင် JOIN
တပ်ဖွဲ့များက join ပြီးအမှန်တကယ်လူမှုရေးအတွေ့အကြုံကိုအတွက်ကမ္ဘာအဝှမ်းမှမိတ်ဆွေများနှင့်ဂိမ်းကစားနှင့်အတူဘုန်းအသရေဘို့ကြိုးစားကြသည်။ အချင်းချင်းလိဂ်ချန်ပီယံ၌သင်တို့၏ကျွမ်းကျင်မှုစမ်းသပ်ဒါမှမဟုတ်ဦးဆောင်တက်နှင့်အစေးပေါ်တွင်သင်၏အခွက်တဆယ်သက်သေပြဖို့လိဂ်ပြိုင်ပွဲများ vs. လိဂ်အတွက်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းကိုအကောင်းဆုံးဂိမ်းကစားအပေါ်ယူပါ။
ဒီ app: တစ် persistent အင်တာနက်ဆက်သွယ်မှု (ကွန်ယက်ကိုအခကြေးငွေလျှောက်ထားနိုင်ပါသည်) လိုအပ်သည်။ EA ရဲ့ Privacy & Cookie ပေါ်လစီများနှင့်အသုံးပြုသူသဘောတူညီချက်များ၏လက်ခံမှုလိုအပ်သည်။ In-ဂိမ်းကြော်ငြာလည်းပါဝင်သည်။ ဒီ app ကို Google Play ဂိမ်းဝန်ဆောင်မှုများကိုအသုံးပြုသည် 13 ကျော်တစ်ဦးပရိသတ်အတွက်ရည်ရွယ်သည်အင်တာနက်နှင့်လူမှုကွန်ယက်ဆိုဒ်များတိုက်ရိုက်လင့်ခ်များပါရှိသည်။ Google ကနေ log out သင်သူငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူသင့်ရဲ့ဂိမ်းကစားမျှဝေချင်ကြဘူးလျှင်တပ်ဆင်ခြင်းမပြုမီဂိမ်းန်ဆောင်မှုများ Play ။
အကူအညီများသို့မဟုတ်မေးမြန်းစုံစမ်းလိုသည်များအဘို့အ http://help.ea.com/en/# သွားရောက်ကြည့်ရှု။
ရက်ပေါင်း 30 '' အသိပေးစာ ea.com/service-updates အပေါ် posted ပြီးနောက် EA ၏အွန်လိုင်း features တွေအနားယူလိမ့်မည်။
FIFA Football အတြက္ စတိုးအသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
FIFA Football အေပၚ စတိုး ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
FIFA Football အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
official-app စတိုး 5.81k 9.94M
FIFA Football ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း FIFA Football အခ်က္အလက္
APK ဗားရွင္း 12.5.03
FIFA Football APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ